Madaxweyne Erdogan oo Waddanka Chad booqday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Madaxweyne Erdogan oo Waddanka Chad booqday
Madaxweyne Erdogan oo Waddanka Chad booqday
Madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa booqasho hal maalin qaadaneysa ku tagay waddanka Chad halkaas oo uu kusoo dhaweeyay madaxweynaha waddanka Chad Idris Deby.Booqashada madaxweynaha Turkiga waxaa ku wehlinayay wasiiro ay ku jiraan arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga iyo waliba ganacsato gaareeysa boqol.
Labada madaxweyne ayaa shir jaraaid ku qabtay qasriga madaxtooyada dalka Chad iyaga oo isla goobtaas ku kala saxiixday heshiisyo dhawr ah.Heshiisyada ayaa ku saabsan waxyaabo kala duwan sida dhaqaalaha,hormarinta dhallinyarada iyo ciyaaraha,farsamada iyo maalgashiga.
Madaxweynaha Chad ayaa sheegay “in booqashadaan ay bog cusub u furi doonto xiriirka labada sii xoogeysanaya ee labada dal”.Sidoo kale labada maadxweyne waxay isla soo qaaday dhawr arrimood oo caalami ah iyaga oo isku fikr ka muujiyay qadyida Falastin iyo Israel.
Booqashada madaxweyne Erdogan ee dalka Chad ayaa qayb ka ah booqashooyin uu ku bixinayay saddax waddan oo Afrikaan ah taas oo uu lugtii ugu horreysay ku bixiyay Sudan oo lagu kala saxiixday sare loogu qaadayo ganacsiga labada dal oo la gaarsiinayo ilaa iyo hal bilyan oo dollar halkii uu markii hore ka ahaa 500 oo malyan dollarka Maraynka.
Previous articleRW ku xigeenka oo daahfuray wajiga labaad ee shirka isla-xisaabtanka Xukuumadda (Sawiro)
Next articleMaxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir oo mar kale mudeysay siyaasiga Cabdiraxman Cabdishakur